अप्रिल, 2010 अटोक्याड-Autodesk, Featured, topografia
अघिल्लो पोष्टमा हामी भूगोल थियो एउटा छवि जुन किरण समावेश गर्दछ, अब हामी त्यसलाई बदल्न चाहन्छौं कोट of Civil 3D।
वक्रहरू स्क्यान गर्नुहोस्
यसको लागि त्यहाँ प्रोग्रामहरू छन् जुन लगभग प्रक्रिया स्वचालित रूपमा, जस्तै AutoDesk रेस्टर डिजाइनको बराबर Descartes Bentley वा ArcScan ESRI मा। यस अवस्थामा म प्यालिनेहरू कोर्दै, पैदल यो गर्न जाँदैछु।
तिनीहरूसँग पूरा गर्न हुँदैन स्मार्टलाइनहरू, तर सामान्य पोलिलाइनको साथ।
मुख्य वक्र नामहरूको साथ स्तरहरू सिर्जना गर्न सिफारिस गरिन्छ। दृश्यहरूको लागि मद्दत गर्नुहोस्।
यो अग्रिम हेर्न सक्षम हुन 0.30 को मोटाई को रेखाहरु संग काम गर्न को लागि बेहतर छ।
रेखाहरूको मोटाई हेर्न, LWT बटन सक्रिय हुनुपर्छ।
सफा गर्नुहोस् र घुमाउनुहोस्।
यो सँधै आवश्यक हुँदैन, तर शैक्षिक उद्देश्यहरूको लागि, हेरौं कसरी यो गरियो। यो हुन्छ कि केहि पोलिलाइनहरू सामेल हुन सकेन किनकि कमाण्ड अवरुद्ध भएको थियो, वा हामीले केही ठाँउहरू बनाएका थियौं रेस जुन वक्रसँग व्यवहार गर्दैन।
सम्पादन पोलिलाइन आदेश सक्रिय छ पैदल
पत्रको साथ बहु विकल्प चयन गरिएको छ M र त्यसपछि प्रविष्ट
हामीले उपचार गर्ने आशा गर्ने सबै पोलियन्सहरू चयन गरिन्छ
हामी जोड्नको लागि J प्रयोग गर्दछौं
हामी एस को प्रयोग गर्न को लागि soften
Polylines लाई उचाई असाइन गर्नुहोस्
तपाईले कर्भहरू छुनु पर्दछ, एक एक गरेर, गुणहरू सक्रिय गर्दै र सम्बन्धित उचाइ तोक्दै। यस अवस्थामा, ती प्रत्येक २ 25 सेन्टीमिटर हुनाले, हरियो घुमाव 322 र त्यसका लागि निम्न हुन्छ नीलो हुँदै गर्दा 322.25, 322.50, 322.75 हुनेछ
आकाशीय व्यक्तिको मामलामा हेर्नुहोस् कि मापदण्डहरू प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ कि क्षेत्रको व्यवहार कस्तो छ भनेर जान्न। यस कारणका लागि, मुख्यहरू फरक रंगमा राख्नुपर्दछ।
तपाईं प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ कि सबै एक साथमा रहन्छ, isometric दृश्य देख्न।
हेर्नुहोस्> थ्रीडी दृश्य> NE Isometric.
पोलिलोइन्सलाई स्तर घटाउँछ।
यो गर्न, हामी ट्याबमा बायाँ प्यानलमा जान्छौँ प्रोस्पेक्टर, र हामी एक नयाँ सतह सिर्जना गर्छौं, प्रकारको TIN.
यहाँ, एकपटक सतह सिर्जना भएपछि, तपाईले गुणहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जसको बीचमा देखिन्छ मास्क, वाटरहाउसहरूर दाबी। यो जहाँ समोच्च रेखाका लागि मापदण्ड देखा पर्दछ (Contours).
दायाँ बटन सकिएको छ Contoursत्यसपछि थप.
वर्णनमा हामी स्क्यान गरियो कक्रहरू राख्नेछौं, र त्यसपछि हामी गर्छौं ok। त्यसो भए हामी हामीले डिजीटल भएका सबै पोलीनेन्सहरू चयन गर्दछौं।
त्यहाँबाट कसरी त्रिकोण्युसन उत्पन्न हुन्छ हेर्नुहोस्।
वक्रहरूको गुण समायोजन गर्नुहोस्।
एउटा विवरण रहन्छ जुन निराश हुन्छ जब यो पहिलो पटकको लागि गरिन्छ। र यो हो, कि कन्टूर लाइनहरू देखिने छैन जस्तो देखिन्छ, तर यो कुरा हो तैनाती गुणहरू.
यसको लागि, यो माउसको दायाँ बटन हो र हामी चयन गर्दछौँ सतह शैली सम्पादन गर्नुहोस्। यस प्यानेलमा, हामी ट्याब छनौट गर्दछौं Contours। In कन्टूर अन्तराल, हामीले स्क्यान गरिएको नक्शाको रूपमा एकै अन्तराल रोज्यौं, जाँच गर्न को लागी कि सबै राम्रो भए।
प्रत्येक 1.00 को मुख्य कवरेज र प्रत्येक 0.25 को माध्यमिक कवरेज।
र त्यहाँ छ। यो स्पष्ट छ कि त्यहाँ चरमोत्कर्मले गर्नुपर्ने काम छ, किनकि प्रोग्रामले बन्द गर्न कोशिस गर्दछ सीमा मान्दै अर्को पानामा कुनै निरन्तरता छैन। हामी हेर्छौं कि अर्को पोस्टमा हामी यसलाई गुगल अर्थ डाटासँग तुलना गर्छौं र साथीहरूको टूरिस्ट गन्तव्य प्रचार गर्दछौं पाइपल्स.
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो पिललाइनबाट स्तर घटाउने (चरण 1)
अर्को पोस्ट4समस्या: एसर Aspire Datashow गर्न पठाइएको छैन एक,अर्को »
म यो civil3d नयाँ हुँ र हामी अर्को DWG फाइल ढाँचामा आकृति वा अटोक्याड पुरानो ढाँचा हामी नागरिक 3d भित्र काम गर्न सक्छन् जो म ती फाइलहरू रूपान्तरण गर्न कदम जान्न चाहनुहुन्छ पायो किनभने समस्या थियो civil3d को संस्करण हामी तिनीहरूले अग्रिम Autodesk थप वर्तमान फाइल कनवर्टर धन्यवाद प्रयोग गर्न आवश्यकता बिना आकृति रेखाहरू थिए भने काम गर्न सक्छन् भनेर।
हो, जब तपाईसँग धेरै अंकहरू डिजिटाइज हुने छ भने, रस्टर डिजाइन एउटा ठूलो मद्दत हो।
स्तर को सतह को डिजाईन गर्न को लागि गाइड को विस्तार गर्नुहोस, तर म आफ्नो काम को बदलन को लागि यदि म RASTER को डिजाइन गर्दै थिए